गाईको दुध कि भैंसीको ? तौल घटाउनका लागि कुन उपयोगी र किन ? – Sanchar Patrika
दुध पोषणतत्वले भरिपूर्ण हुन्छ त्यसकारण यसलाई स्वस्थ खान्कीमा समावेश गरिन्छ । दुधमा पाइने पौष्टिक तत्व बालबालिका, वृद्ध–वृद्धा र सबै खालका उमेर समूहका लागि आवश्यक छ । यदि कोही व्यक्ति शाकाहारी छ भने उसले त प्रोटिनका प्राप्त गर्नका लागि आफ्नो खान्कीमा दुध समावेश गर्नैपर्छ । के तपाईंलाई गाईको दुध अलि हल्का हुन्छ भन्ने थाहा छ ? र भैंसीको दुधको तुलनामा यसमा क्यालोरी पनि कम हुन्छ ।
तसर्थ, यदि तपाईं आफ्नो तौल घटाउने प्रक्रियामा हुनुहुन्छ भने गाईको दुध रोज्नुहोस् । तर पोषणको कुरा आउँदा कुन दुध रोज्ने भन्ने प्रश्न आउन सक्छ । गाई र भैंसी दुबैको दुध मानव शरीरका लागि पोषिलो हुन्छ । यी दुबै प्रकारको दुधमा क्याल्सियम, भिटामिन बी १२ र फोस्फोरस पाइन्छ । यो प्रोटिनको राम्रो स्रोत भएकोले यसले हड्डी बलियो बनाउन र यसलाई सुख्खा हुनबाट जोगाउँछ । यहाँ दुधका केही फाइदाबारे कुरा गरिएको छ ।
Prevकोरोना जितेर अस्पतालवाट घर फर्कन लाग्दा नातिनीले अंगालो हालेर अमिताभलाई यसो भनिन् !नातिनीको त्यो ब्यवहारले अमिताभको मन थप भक्कानियो ।